Mak 16 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ozi Ọma Mak Dere 16:1-8
A kpọlitere Jizọs n’ọnwụ (1-8)
16 Mgbe Ụbọchị Izu Ike+ gachara, Meri Magdalin, Meri+ nne Jems, na Salomi zụrụ ihe na-esi ísì ọma ka ha gaa tee ozu Jizọs.+ 2 N’isi ụtụtụ, n’ụbọchị mbụ n’izu, mgbe anyanwụ warala, ha bịara n’ili* ahụ.+ 3 Ha nọ na-agwa ibe ha, sị: “Ònye ga-akwapụrụ anyị nkume n’ọnụ ili a?” 4 Ma mgbe ha leliri anya, ha hụrụ na a kwapụla nkume ahụ, n’agbanyeghị na o buru nnukwu ibu.+ 5 Mgbe ha banyere n’ili ahụ, ha hụrụ nwa okorobịa yi uwe mwụda ọcha ka ọ nọ ọdụ n’akụkụ aka nri. O wee ju ha anya. 6 Ọ sịrị ha: “Ya ejula unu anya.+ Unu na-achọ Jizọs onye Nazaret, onye e gburu n’elu osisi. A kpọlitela ya.+ Ọ nọghị ebe a. Lee, ọ bụ n’ebe a ka e liri ya.+ 7 Ma gaanụ kọọrọ ndị na-eso ụzọ ya nakwa Pita, sị, ‘O burula unu ụzọ gawa Galili.+ Unu ga-ahụ ya ebe ahụ, dị ka ọ gwara unu.’”+ 8 Mgbe ha si n’ili ahụ pụta, ha gbalagara. Ahụ́ nọ na-ama ha jijiji, ihe merenụ rikwara ha ọnụ. O nweghị onye ha gwara ihe ọ bụla n’ihi na egwu ji ha.*+
^ Akwụkwọ Nsọ ndị e ji aka dee n’oge ochie, bụ́ ndị kwuru ihe e ji n’aka, gosiri na Ozi Ọma Mak kwụsịrị n’ihe e dere n’amaokwu nke 8. Gụọ A3.